आज नयाँ वर्षमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ? “हेर्नुहोस राशिफल” – SagunKhabar
आज नयाँ वर्षमा तपाईको भाग्य कस्तो छ ? “हेर्नुहोस राशिफल”
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्तर्तुः,परिधावी नाम संवत्सर,शाके १९४१,सम्वत २०७६ साल वैशाख १ गते रविबार नेपाल सम्बत ११३९ चौलाथ्व,सन् २०१९ अप्रिल १४ तारिक चैत्र शुक्लपक्ष नवमी तिथि विहान ६ वजेर ३० मिनेटसम्म,अश्लेषा नक्षत्र राती ३ वजेर २० मिनेटसम्म,शूलयोग,कौलवकरण,आनन्दादियोग वज्र,सूर्य मेष राशीमा,चन्द्रमा राती ३ वजेर २० मिनेट सम्म कर्कट उप्रान्त सिंह राशीमा ।
मुहूर्त – शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३९ वजेबाट मध्यान्ह १२÷३० वजेसम्म रहनेछ । सामान्य गुली काल मुहूर्तः–अपरान्ह ३÷१५ वजेबाट ४÷५१ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ राहुकाल मुहूर्तः–अपरान्ह ४÷५१ वजेबाट ५÷२८ वजेसम्म रहनेछ । अशुभ यमघण्टायोगः– मध्यान्ह १२÷५ वजेबाट अपरान्ह १÷४० वजेसम्म रहनेछ । अशुभ दूरमुहूर्तः–अपरान्ह ४÷४५ वजेबाट ५÷३६ वजेसम्म रहनेछ ।
बार वेला – सूर्योदयबाट प्रातः ७÷१८ वजेसम्म उद्वेग वेला,७÷१८ वजेबाट ८÷५४ वजेसम्म चर वेला,८÷५४ वजेबाट १०÷२९ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷२९ वजेबाट १२÷५ वजेसम्म अमृत वेला,१२÷५ वजेबाट १÷४० वजेसम्म काल वेला,१÷४० वजेबाट ३÷१६ वजेसम्म शुभ वेला,३÷१६ वजेबाट ४÷५१ वजेसम्म रोग वेला र ४÷५१ वजेबाट सूर्यास्तसम्म उद्वेग वेला रहनेछ ।
बार वेला – सूर्यास्तबाट ७÷५२ वजेसम्म शुभ वेला,७÷५२ वजेबाट ९÷१७ वजेसम्म अमृत वेला,९÷१७ वजेबाट १०÷४१ वजेसम्म चर वेला,१०÷४१ वजेबाट १२÷६ वजेसम्म रोग वेला,१२÷६ वजेबाट १÷३० वजेसम्म काल वेला,१÷३० वजेबाट २÷५५ वजेसम्म लाभ वेला,२÷५५ वजेबाट ४÷१९ वजेसम्म उद्वेग र ४÷१९ वजेबाट सूर्योदयसम्म शुभ वेला रहनेछ । शुभाशुभ“जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति”।
मेषः— साना कुरालाई लिएर आफन्तमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । अरुको काम गरेर जश मिल्ने छैन । मानसिक चिन्ता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट उचित फल मिल्ने छैन । खर्चमा तिव्रता आउनेछ ।
वृषः— आफ्नो ख्याल आफैले राख्नु होला । काम गर्न पछि परिने छैन । उद्योग धन्दमा प्रगति हुनेछ । अरुबाट सहयोग पाउने आशा नराख्नु होला । गरेका काम फलदायी नै होलान् । आय बढ्नेछ ।
मिथुनः— संयम भएर काम गर्नु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुने छन् । अरुको भरोसा कम गर्नु होला । आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य सुधार आउनेछ । कारोवारमा भने ध्यान दिनै पर्ने देखिन्छ ।
कर्कटः— समय थोरै अनुकुल देखिन्छ । गरेका काम सफल हुनेछन् । आम्दानी खर्चको सन्तुलन मिल्नेछ । आत्मियजन बाट सहयोग मिल्नेछ । यात्राको सम्भावन देखिन्छ । गएका ठाँउमा स्वागत सत्कार मिल्नेछ ।
सिंहः—आफुले मात्र बल गरेर केहि हुने छैन समयले कम साथ दिने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दि कायम रहनेछ । अनावस्यक खर्च बढ्नेछ । अरुको भर धेरै नपर्नु होला धोका दिन सक्छन् ।
कन्याः— कुनै काम गर्नु छ भने ढिला सुस्ति नगर्नु होला । ढिला गर्दा आफैलाई घाटा हुनेछ । समयमा गरेका काम भने सफल हुनेछन् । व्यापार व्यवसायबाट सामान्य आम्दानी हुनेछ । आफन्तबाट सहयोग कम मिल्नेछ ।
तुलाः— कसैको लागि प्रेरणको स्रोत बन्न सकिन्छ । गरेका काम सफल त हुने नै छन् आय र प्रतिष्ठा पनि बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा नयाँ सम्भावनाहरु देखा पर्ने छन् । मन प्रफुल्लित हुनेछ ।
वृश्चिकः— आफुलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्नु होला । अरुको भलाईमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु होला । भाग्यले थोरै साथ दिनेछ । धार्मिक यात्रा हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
धनुः— समयमा सुधार आउन अझै प्रतिक्षा गर्नु पर्ला । अनावस्यक काममा नै समय र धनको नाश हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा पनि सुधार आउने देखिन्न । आफन्तजनसँग बैरभाव बढ्न सक्छ ।
मकरः— काममा ढिला सुस्ति नगर्नु होला,ढिला गर्दा काम विग्रन सक्छ । समयमा काम गर्न सक्नु भयो भने लाभ पनि लिन सक्नु हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट लाभान्वित भईनेछ । आफन्तसँग भेटघाट होला ।
कुम्भः— विवादको टुङ्गो लाग्ने प्रवल सम्भावना छ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखिने छन् । काम गर्दा गाह्रो नमानी कन गर्नु होला । काममा स्थायीत्व दिनु पर्ने देखिन्छ ।
मिनः— समयमा काम गर्न सके फाइदा लिन सकिने छ नत्र फाईदा अरुलाई पनि बाढ्नु पर्ला । भावावेगमा आएर कुनै पनि काम नगर्नु होला । विरोधीको बक्रदृष्टि तपाई माथि पर्दैछ सर्तक रहनु होला ।
आज नयाँ वर्षमा तपाईको भाग्य कस्तो ? २०७६ साल वैशाख १ गते आइतबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
नयाँ वर्षको दिन गर्नुहोस् यी कामहरु तपाईको घरमा वर्षभरि लक्ष्मीको बास हुनेछ, अबश्य पढ्नुहोला